अब बाग्लुङबाट २५ मिनेटमै काठमाडौं ! - Dainik Online Dainik Online
अब बाग्लुङबाट २५ मिनेटमै काठमाडौं !
प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०७८, मंगलबार ११ : ०८
गीतमा भनिएजस्तै विमानस्थल विसं २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनः एक वर्ष सञ्चालनमा आयो । यसअघि धवलागिरि अञ्चलको सदरमुकाम बागलुङबाट पश्चिमको प्रमुख शहर एवं पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुुकाम पोखरा तथा राजधानी काठमाडाँैंलाई जोड्न हवाईजहाजबाहेकको अर्को विकल्प नरहेकामा विसं २०४८ मा पोखराबाट बागलुङ बजार सडक सञ्जालले जोडिएपछि विमानस्थल बन्द भएको थियो । विसं २०७४र७५ मा बलेवामा हप्तामा दुईदिन हवाईजहाज सरर उडे । बागलुङ नगरपालिकाले एयरलायन्स कम्पनीहरुको क्षति बेहोर्ने गरी सम्झौता गरेरसमेत एक वर्षमा जहाज सञ्चालन ग¥यो ।